Tany lehibe fifandirana manerana izao tontolo izao - Rosiana rehetra ireo Mpisolovava eto! Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Tany lehibe fifandirana manerana izao tontolo izao
Raisin'i SHINA ho an'i TAIWAN ho toy ny mpikomy faritany
LIBYA filazana momba, km toradroa any amin'ny faritra avaratr'i NIGER sy ny ampahany atsimo-atsinanana ALZERIA, ary ihany koa dia manana fari-dranomasina fari-tanin'ny fifandirana any TONIZIABAHRAIN sy QATAR: fifandirana Ara-nandritra ny Hawar Nosy sy ny fari-dranomasina fari-tanin'ny anelanelan'i BAHRAIN sy QATAR. KOETY tompon'ny Qaruh sy Umm al Maradim nosy dia niady hevitra tamin'ny Arabia Saodita. IRAN mitana roa-nosy ao amin'ny Golfa persiana nilaza ny Emira Arabo Mitambatra: Kely Tunb (antsoina hoe Tunb toy Sughra amin'ny teny arabo amin'ny emira arabo mitambatra sy ny Jazireh-ianareo Tonb-e Kuchek amin'ny teny persiana Iran) sy Lehibe kokoa Tunb (antsoina hoe Tunb al Kubra amin'ny teny arabo amin'ny emira arabo mitambatra sy ny Jazireh-ianareo Tonb-e Bozorg amin'ny teny persiana Iran) dia niara-mitantana miaraka amin'ny emira arabo mitambatra nosy iray ao amin'ny Golfa persiana nilaza ny emirà arabo mitambatra (antsoina hoe Abou Musa amin'ny teny arabo amin'ny emira arabo mitambatra sy ny Jazireh-ianareo Abou Musa amin'ny teny persiana Iran)-nandritra izay Iran efa naka ny dingana mba hiezaka mafy samirery ny fanaraha-maso hatramin'ny, anisan'izany ny fahazoana ny teritery, ary ny miaramila koa manaova-maso eo amin'ny nosy any emirà arabo mitambatra dia efa nahangona manan-danja ara-diplomatika hanohana ao amin'ny faritra amin'ny hetsi-panoherana ireo Iraniana ny fihetsika. IRAN sy IRAK, araka ny valo taona ny ady izy, namerina amin'ny laoniny ny fifandraisana ara-diplaomatika tamin'ny taona, fa dia mbola nandamina ny fifandirana momba ny sisintany ny tanin'ireo, ny fahalalahana fikarohana sy ny fiandrianam-pirenena nandritra ny Shatt al Arab renirano. (IRAKA ihany koa ny fifandirana noho ny rano ny drafitra fampandrosoana amin'ny alalan'ny Torkia ho an'ny Tigris sy ny Ony Eofrata.) BOLIVIA efa naniry ny fiandrianany dalantsara ny South Pacific Ocean hatramin'ny Atacama faritra dia very any SHILY tamin'ny.
Misy ihany koa dia ny fifandirana mikasika ny Rio Lauca rano ny zon'olombelona.
(Chile manana fari-milaza amin'ny tendrontany atsimo, ny Shiliana Antarctic Faritany, izay ampahany overlaps Arzantina sy ny Anglisy filazana.) Fizarana roa ny sisin-tany ny BREZILA amin'ny URUGUAY ao fifandirana - Arroio Invernada (Arroyo de la Invernada) faritra Rio Quarai (Rio Cuareim) sy ny nosy ao amin'ny confluence ny Rio Quarai sy ny Orogoay Renirano. BRITISH RANOMASIMBE INDIANA ny FARITANY: ny nosy Diego Garcia dia nilaza ny Maorisy sy ny Chagos Vondronosy dia nilaza ny Seychelles. Sinoa Nasionalista nisintona ny nosy tamin'ny taorian'ny very ny Komonista ao amin'ny tanibe ny ady an-trano. SHINA ihany koa ny fifandirana fizarana roa ny sisin-tany amin'i ROSIA, -km fizarana ny sisin-tany amin'ny KOREA AVARATRA ao amin'ny Paektu-san (mountain) faritra, sy ny fari-dranomasina fari-tanin'ny amin'ny VIETNAM ao amin'ny Helodrano ny Tonkin. Nosy Paracel no nipetrahan'ny Shina, nefa milaza amin'ny Vietnam sy Taiwan. Shina milaza ny Japoney-nitantana Senkaku-shoto (Nosy Senkaku Diaoyu Tai), toy ny ataon'ny Taiwan. NIKARAGOA ary KOLOMBIA dia niady hevitra ny Vondronosy de San Andres y Providencia sy Quita Sueno Banky. VENEZOELA ihany koa dia manana fari-dranomasina fari-tanin'ny fifandirana amin'ny KOLOMBIA ao amin'ny Helodrano any Venezoela, sy ny filazana rehetra Guyana andrefan'i anelanelan'ny renirano essequibo Renirano. CYPRUS: dia nilaza ny ady vaky ny nosy ho roa de facto mahaleotena ny faritra, ny grika Shipriota faritra fehezin'ny ekena iraisam-pirenena Shipriota Governemanta (ny nosy tany ny faritra misy anao) ary ny tiorka-Shipriota area (ny nosy), izay dia tafasaraka amin'ny firenena MIKAMBANA buffer faritra (ny nosy) misy roa UK fiandrianany-pototry ny faritra ao amin'ny teny grika Shipriota ampahany amin ny nosy. Torkia sy Gresy koa sarotra ny fari-dranomasina, an'habakabaka sy manamorona ny fifandirana ao amin'ny Ranomasina égée. INDONEZIA tamin'ny ady nandritra ny roa-nosy amin'ny MALEZIA, izay any amin'ny fifandirana SINGAPORE nandritra ny roa ireo nosy hafa. Amin'ny toe-javatra maro izany dia nitarika ny miaramila, ady.
ESTONIA milaza ny, km toradroa faritany ao amin'ny Narva sy Pechory faritra ao ROSIA, mifototra amin'ny sisin-tany napetraka eo ambany ny Fifanarahana Fandriampahalemana ny Tartu.
Mifototra amin'ny Fifanarahana ny Riga, LETONIA efa nilaza ny Abrene Pytalovo fizarana ny sisintany ceded ny zavatra Repoblika Sosialista Sovietika an'i Rosia tamin'ny. Misy ihany koa amin'izao fotoana izao lahateny nandritra ny ady tany amin'ny LITOANIA (zava-dehibe voalohany dia ny fitrandrahana solitany ny zon'olombelona). ETIOPIA ary SOMALIA: fifandirana ara-nandritra ny Ogaden, sy ny Etiopiana miaramila efa niampita ny sisintany.
Ny ankamaroan ny atsimo ny antsasaky ny sisin-tany amin'ny Somalia dia Vonjimaika ny Fitantanana Tsipika.
ETIOPIA, ERITREA tany tompony ny telozoro ny tany Badme ary na dia mpanelanelana amin'ny alalan'ny la Haye nitondra vahaolana, ny olana mbola saro-pady eo amin'ny firenena roa tonta. NOSY FALKLAND: Filazana amin'ny UK-mitantana ireo nosy (Islas Malvinas) Arzantina no nitarika ny disadisa ara-tafika tamin'ny taona. Ny ady nanomboka tamin'ny. Hamaky bebe kokoa momba izany ao amin'ny toerana ity. Arzantina ihany koa ny filazana UK-nitantana Atsimo Georgia sy ny faritra Atsimon'ny Nosy Sandwich. GABON sy EQUATORIAL GUINEA dia amin'ny fifandirana nandritra ny fari-dranomasina fari-tanin'ny sy ny fiandrianam-pirenena manerana ny nosy ao Corisco Helo-drano. EQUATORIAL GUINEA koa dia amin'ny ady amin'ny NIZERIA ny sisin-dranomasina sy ny fahefana ny menaka-karena faritra ao amin'ny Helodrano ny Guinea. GIBRALTAR dia-loharanom-ny disadisa eo ESPAINA sy ny UK. Espaina ny fanaraha-maso ny dimy toerana ny fiandrianam-pirenena (nivoaka de soberania) sy eny amin'ny morontsiraka Maraoka - ny amorontsiraka enclaves ny Ceuta ary ao melilla, izay Maraoka ny fifaninanana, toy izany koa ny nosy ny Penon de Alhucemas, Penon de Velez de la Gomera, ary Islas Chafarinas. Ny sisiny ANDREFANA sy ao GAZA dia ny ISIRAELY-variana amin'ny toerana amin'izao fotoana izao ny foto-kevitra ny Israeliana sy ny Palestiniana Vonjimaika Fifanarahana. Isiraely mitana ny GOLANA HEIGHTS (SYRIA). JAPANA milaza ny nosy ny Etorofu, Kunashiri, Shikotan, ary ny Habomai vondrona nipetrahan'ny ny Firaisana Sovietika tamin'ny taona, fotoana izao tantanan'ny ROSIA. Liancourt Vato (Takeshima Tokdo), notarihin'i KOREA ATSIMO, dia nanambara avy any JAPANA. Ny Japoney-nitantana Senkaku-shoto (Nosy Senkaku Diaoyu Tai) dia nilaza ny roa SINA ary any TAIWAN. Ny Nosy Paracel no nipetrahan'ny SHINA, nefa milaza amin'ny VIETNAM sy TAIWAN.
KASHMIR: manamorona ny fifandirana eo amin'i INDIA sy PAKISTANA.
EKOATERA ary PERÒ fifandirana fizarana telo ny sisin-tany
KASHMIR no mandrafitra ny faritra maro anefa no antsoina hoe"Jammu Kashmir"ho roa faritra be mponina indrindra ao amin'ny fanjakana, ny faritra hafa ho Ladakh, Gilgit, Baltistan sy Skardu. PAKISTAN nisambotra maro amin'ireo faritra ao (faritra sasany dia nalaina tao amin'ny China). Ny ampahany be indrindra amin'ny tany am-boalohany ny toetry ny Jammu Kashmir mbola mijanona ho firenena iray ao INDIA. INDIA sy PAKISTANA ihany koa ny rano-ny fizarana ny olana ny Indus Renirano (Wular Barrage) sy INDIA dia manana ady tany amin'i Shina.
Ny mamaky ny Tantara ao ambadiky ny Tantara ao KASHMIR.
KOSOVO: ara-Poko Albanianians laharana. tapitrisa manohitra ny. (ny ankamaroany Kristianina) Serbians, izay milaza Kosovo ho toy ny faritany. Kosovo nanambara ny fahaleovantena tamin'ny febroary, fa mbola ho eken'ny firenena rehetra. Ny tantara ao ambadiky ny tantara dia ny fahaleovantenan'i Kosovo. Ny sasany faritra MOLDAVIA, ary UKRAINE - anisan'izany ny Bessarabia sy Avaratra Bukovina - dia heverina Bucarest maha-ara-tantara ao anatin'ny ROMANIA ity faritra dia nampidirina any amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha ny fanarahana ny Cocktails-Ribbentrop Fifanarahana tamin'ny. ROMANIA ihany koa ny fifandirana ao OKRAINA ny continental talantalana ny Ranomasina Mainty ambany izay manan-danja ny entona sy solika mipetraka mety misy izy dia nanaiky tamin'ny taona ny roa taona ny fifampiraharahana vanim-potoana, araka izay antoko na afaka manondro ady Iraisam-pirenena ny Fitsarana. I KYRGYZSTAN amin'ny fifandirana ara-amin'ny TAJIKISTAN eo ny sisin-tany ao Isfara Valley amin'ny faritra.
TAJIKISTAN ihany koa ny fifandirana indrindra ny sisin-tany amin'i SHINA.
IRLANDY AVARATRA: Ny taonjato faha- nahita ny voalohany anjara avy ao Angletera Irlandey ny raharaha rehefa ny Earl ny Pembroke, fantatra amin'ny anarana hoe Strongbow, hanitsy ao an-toerana fifandirana ao Leinster ao. King Henry II tany amin'ny taona manaraka. Ao amin'ny taonjato faha, voalohany Henry VIII ary avy eo dia Elizabeth aho handray ny fampitomboana mahaliana ny any Irlandy. Fanjanahana mampitombo, niteraka eny maro ny fikomiany hariva ny taonjato.
Ny voalohany Irlandy Avaratra Parlemanta manokatra tamin'ny taona, sy Irlandy (fanaovana ny faritra atsimon'i ny nosy) lasa feno repoblika tamin'ny.
Ny governemanta Britanika manome vaovao momba ny lalàmpanorenana no miantoka ny Irlandy Avaratra Parlemanta amin'ny Stormont, fa ny mifanohitra amin'ny Zavatra Repoblikana ny Tafika dia mitohy. Nandritra ny Paska ny taona, Ulster Sendikalista sy ny IRA nanao sonia ny zoma Tsara Fifanarahana sy tamin'ny novambra, dia nahatratra ny lalàm-panorenana fifanarahana. Na izany aza, taorian'ny taonjato maro Avaratr'i Irlandy mbola anisan'ny Fanjakana Mitambatra. Kit Thornton mandray anjara toy izao manaraka izao:"ny Sendikalista sy Nasionalista dia samy miaiky fa Irlandy Avaratra dia ampahany amin'ny United Kingdom. Efatra amin'ireo firenena ao anatin'ny UK (Angletera, Irlandy Avaratra, Ecosse ary pays de Galles) rehetra manana ny sainam-pirenena, ny marika ary na dia ny teny ny pound sterling. Ohatra, raha mijery ny Zavatra kilao vola madinika, izany dia Laika eo izany, ilay voninkazo-pirenena eto pays de Galles. Scotland manana Tsilo amin'ny azy ireo, Angletera dia ny raozy. Afaka mahazo Avaratra Irlandey banky sterling bank notes, malagasy sterling bank notes sy ny Scottish sterling bank notes. Misy toeram-pivarotana ao Angletera tsy handray Avaratra Irlandey bank notes satria mijery izany isan-karazany. Irlandy avaratra tena tsy ao Angletera, dia ny ampahany ny Fanjakana Mitambatra"SPRATLEY NOSY: sarotra ny fifandirana eo amin'i SHINA, MALAYZIA, FILIPINA, TAIWAN ary VIETNAM. Tamin'ny taona, BRUNEI naorina manokana fanjonoana faritra izay mahafaoka Louisa Harambato any amin'ny faritra atsimon'i Spratly Nosy, fa tsy ampahibemaso fa ny nosy. SOUDAN atsimo ary EJIPTA ady iraisam-pirenena sisin-tany, amin'ny famoronana ny"Hala'ib Triangle"momba faritra, km toradroa. CUBA fifandirana ny ANTSIKA tobin'ny tafika an-Dranomasina any Guantanamo Bay, leased ny ANTSIKA sy ny fiaraha-mientana ifampizarana ihany fifanarahana na ANTSIKA fandaozana ny faritra afaka hamarana ny lease.
Federaly asa Fanompoana ho an'ny fanaraha-maso ny Fiarovana ny Mpanjifa sy ny Fifanampiana - Mpisolovava rosiana an-Tserasera
Йөклөлөк һәм бала табыу буйынса отпускыла һәм пособие Рәсәй - Рәсәй - рәсәй онлайн ҡануниәт